Seagate Wireless Plus 1TB (II) WiFi Drive Review: Lozisialy sy Fandidiana | Vaovao IPhone
Seagate Wireless Plus 1TB (II) WiFi Drive Review: Rindrambaiko sy fiasa
Ny andro hafa dia niresaka momba azy aho Seagate Wireless Plus, kapila mafy WiFi 1TB ahafahantsika manitatra ny fitahirizan'ireo fitaovantsika. Izahay dia nijery ny fifandraisana, nahitana kojakoja sy ny fisehoan'ny ankamaroan'ny fitaovana, izay heveriko fa nihoatra ny fandalovana avo na dia eo aza ny fahasahiranan'ny mpampifandray USB. Fa fotoana izao hijerena manao ahoana ny asany ary raha manatanteraka izay ampanantenainy.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mampifandray ilay kapila mafy amin'ny solosaintsika dia ny mamolavola azy io. Miankina amin'ny rafitra ampiasaintsika, tsy maintsy ampiasaintsika ny endrika mifanaraka amin'ny Mac na ny rafitra NTFS, mifanaraka amin'ny Windows sy Mac misaotra ny mpamily Paragon NTFS izay tafiditra ao anaty disk. Raha ny amiko, amin'ireo solosaina rehetra ananako ao an-trano mampiasa OS X dia aleoko mampiasa ny endrika Mac.
Vantany vao vita izany dia apetrantsika ny programa "Seagate Media Sync" izay tonga ao amin'ny kapila ihany koa afaka maka amin'ny pejiny ofisialy isika. Ny programa dia mamela antsika manampy votoaty amin'ny fomba tena tsotra amin'ilay kapila mafy. Safidio ny loharanon'ireo rakitra sy ny karazana rakitra haino aman-jery tianao ampiana. Isaky ny mampifandray azy ianao dia kitiho ny bokotra Synchronize ary havaozina ny atin'ny kapila.
Raha vao nampidirina ny atiny dia afaka mifandray amin'ny kapila isika, mifantina tsotra fotsiny ny tamba-jotra WiFi izay noforoniny. Amin'ny toerana misy anao dia tsy misy fanalahidy fiarovana izany fa afaka manampy azy mora foana. Andeha isika hahatsiaro fa mamela ny fifandraisana ny fitaovana hatramin'ny 8 na dia 3 fotsiny aza no afaka milalao atiny HD samihafa miaraka.
Noho ny fampiharana maimaim-poana misy an'ny iOS dia afaka mahita ny atin'ny kapila rehetra amin'ny iPad sy iPhone izahay. Eny, ny atiny rehetra izay mifanaraka amin'ny rindranasa, hatramin'ny ny endrika izay mifanaraka amin'ny iTunes ihany no tohanany. Ka tsy misy AVI, MKV na mitovy aminy, teboka ratsy ho an'ireo izay tsy nanova ny tranomboky, na dia misy aza ny vahaolana hazavaiko amin'ny lahatsoratra hafa. Raha ny amiko dia mifanaraka amin'ny iTunes ny tranombokiko iray manontolo, ka tsy misy olana amin'ny filalaovana rakitra, eny fa na dia ny sarimihetsika 1080p misy dikanteny. Ny rindranasa iOS dia ahafahantsika misintona ny atiny avy amin'ny kapila mangarahara mankany amin'ny fitaovantsika hilalao azy ivelan'ny Internet, saingy tsy mamela antsika hanisy atiny ao anaty kapila mafy.
Amin'ny fampiharana dia afaka mivezivezy amin'ny maody "File Explorer" isika na amin'ny fijerena ny tranomboky multimedia misy ireo fonon'ireo rakitra. Ny teboka ratsy dia ny tsy fanasokajiana azy amin'ny sokajy manavaka ny sarimihetsika sy ny Series, ary koa raha tsy misy andiany dia tsy mampiasa ny metadata izy hampisehoana aminao ny vanim-potoana sy ny toko. Manantena aho fa amin'ny fanavaozana ho avy dia hanatsara ny fampiharana izy ireo. Raha tsy izany dia milamina tsara ilay programa. Ny sasany aminareo dia nanontany ahy raha tapaka ny filalaovako. Taorian'ny fampiasana herinandro ary nahita fizarana andian-tantara maro ary sarimihetsika sasantsasany, tsy nisy fotoana tapaka akory ny fiterahana. Fotoana roa monja rehefa nandao ny kapila sy ny iPad nifandray nandritra ny fotoana ela aho nefa tsy nilalao na inona na inona dia voatery novonoiko ilay kapila mba ho hitan'ny iPad indray.
ihany koa afaka miditra amin'ny atin'ny kapila avy amin'ny solosaina rehetra isika. Tahaka ny amin'ny iPad na iPhone, tsy maintsy mifandray amin'ny tamba-jotra WiFi disk ianao ary mampiasa ny browser-ntsika hiditra ao anaty disk. Afaka milalao ny fisie tsy misy olana isika, ary manampy rakitra ao anaty kapila, na dia mety ho miadana kokoa aza ny fizotrany noho ny fampiasana USB.
Ny fampiharana Seagate Media dia safidy tsara hilalao ny atin'ny Seagate Wireless Plus, saingy misy fatiantoka tsy manohana AVI, MKV na rakitra hafa izay tsy mifanaraka amin'ny iTunes. Raha tsy fanakantsakanana ho anao izany, ny fiasan'ny kapila mafy, ny fitoniana amin'ny fiterahana, ny mifanentana amin'ireo dikanteny ary ny fahatsoran'ny fiasa no mahatonga ny Seagate Wireless Plus dia safidy tsara hampiasaina ho tahiry ivelany ho an'ny iPad na iPhone.
Ankoatry ny olana amin'ireo endrika manohana, koa tokony hanatsara ny fomba fanasokajiana ny atiny media satria ny iray dia miaraka amin'ilay andian-tantara mifangaro amin'ny sarimihetsika ankoatry ny tsy mahay manavaka ny vanim-potoana na ny toko.
Fampahalalana bebe kokoa - Seagate Wireless Plus 1TB (I) WiFi Drive Review: Hardware
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Seagate Wireless Plus 1TB (II) WiFi Drive Review: Rindrambaiko sy fiasa
Salama. Rahoviana ianao no hamoaka ny lahatsoratra momba ny fomba hijerena ireo rakitra avi sy mkv avy amin'ity fitaovana ity amin'ny iPad na iPhone? Misaotra betsaka
Valio i gonzalo
Manana izany amin'ny lisitry ny zavatra tokony hatao aho. Manantena aho ny hamoaka azy anio na rahampitso farafaharatsiny. Mampitandrina anao aho fa ilaina ny Jailbreak, satria amin'ny alàlan'ny XBMC.
wolfo dia hoy izy:
Tsy mila xbmc ianao, miaraka amin'ny app cinexplayer, miditra amin'ny Internet mankany amin'ny IP an'ny kapila wifi ianao ary milalao karazana rakitra video.
Mamaly an'i wolfo
Erwin dubon dia hoy izy:
Ho an'i iOS dia misy ny fampiharana antsoina hoe goodplayer no tsara indrindra! milalao endrika maro. miditra fotsiny ianao ary misafidy ny kisary kapila mafy ary dia izay.
mampifandray amin'ny upnp izy io ka haingana dia haingana ary tsy mila mametraka ip ianao
Valiny tamin'i Erwin Dubon
Mampiasa ny rahona storejet transcendt aho ary hijerena ireo karazan-tsary rehetra ampiasako ilay cinexplayer.
Miditra ianao toy ny hoe eo amin'ny tranonkala izany, kitiho ny fisie tianao ho hitanao ary mikapoka filalaovana, azonao atao ny milalao airplay, avy amin'ity rindrambaiko ity dia ahitanao ny zava-drehetra sy hilalaovana ny zava-drehetra.
Hotsapaiko io, misaotra !!!
Sitroka izy, mafana loatra ary tapaka, tsy vonoina izy, raha fintinina dia tsy manoro hevitra azy mihitsy aho
Mampiasa azy io saika isan'andro aho ary tsy manana ireo olana lazainao ireo.
Vita ny fividianako ny Seagate Wireless plus, ny marina dia tsy azoko loatra izany, te-hitahiry ireo sarimihetsika amin'ny ahidrano alaina avy amin'ny ipad aho fa tsy amin'ny iTunes, ary avy eo mijery amin'ny fahitalavitra soni bravía miaraka amin'ny appeltv lazao amiko raha izany dia mety ho Misaotra betsaka
Rehefa milaza ny sarimihetsika sintominao amin'ny iPad ianao dia heveriko fa iTunes? Avy eo ianao dia tsy hanana olana amin'ny fanaovana izay lazainao.
Salama, miaraka amin'ny firmware vaovao, rehefa misafidy ny tambajotra misaraka aho dia manokatra rindranasa tranonkala mivantana hamerina mamorona izy ary tsy mamela ahy hitantana ilay rindranasa teo aloha ho an'ny iPad, fantatrao ve ny fomba famahana izany? Ratsy be ilay application web.
Salama. Azonao atao ve ny mamafa ny sary, ny sarimihetsika na ny antontan-taratasy avy amin'ny seagete?
Ary ahoana no ahafahanao manafatra?
Avy amin'ny iPad na iPhone?
Ahoana no ahitako ny dikanteny, manampy ny fisie * .SRT miaraka amin'ny anarana mitovy amin'ilay horonantsary sa tsy maintsy manana endrika na endrika manokana hafa… ????
Bladimir dia hoy izy:
Toa tsy dia azo itokisana amiko ny firafiny satria nijanona tsy niasa ny disk rehefa afaka 20 andro nampiasana ahy, mety ho tranga mitokana izy io; fa ity ny vokatra Seagate fahatelo novidiako ary manana olana aho
Valiny tamin'i Bladimir
Amboary ny tenanao iPad (I): bokotra Home
FX Photo Studio HD: Mpanonta sary misy fiatraikany maro sy endrika mahavariana